3 Mazano ekusarudza Kwatingaita Nzvimbo Yakanakisisa yeZvato Rekutengeserana
Nguva: 2018-Jul-17 Hits:
Vatowanda yakakurumbira dzaishandiswa inoratidza matumba kazhinji wakawandirwa maererano ukuru. Exhibitors achava asati mukana sarudza uye kazhinji bhuku nzvimbo gore rinouya mumazuva pashoo vanopinda anoratidza gore negore. Kana nguva yako yokutanga nedzokunze panguva chokuratidza, Edza kubhadhara dumba rako nguva pfupi zvichibvira. Uchave nezvimwe zvingasarudzwa zvokusarudza.
1.The yakanakisisa dzezvimwe hwekutengeserana wako anoratidza matumba ndivo unyatsobatsirwa rutsoka motokari. Ava kazhinji pedyo horo nesuo uye pakona dzezvimwe, izvo zvinopa zvikuru motokari. Nokuti ndivo kupfuura zvinodiwa, dzezvimwe izvi zviuye pa mari inotangira.
2.Try kudzivisa kusarudza dzezvimwe pamwe zvakavhara, zvakadai yembiru kana sarudzo. Zvingaomera kuvaka wako kutengeserana anoratidza dumba kumativi zvipingamupinyi izvi. Cl Ratidza ichakupa yakanakisisa dumba mhinduro pakuti nzvimbo yenyu. Uyewo, ivo angaita kufanana mukuru-motokari nzvimbo, kuva pedyo dare zvokudya kana restrooms arege kukupa chokupfeka ukatarisira. vaivapo iwayo vane chinangwa pachedu kudya kana kuita pachake gomba chemabhazi.
3.If musingadi kuwana kwenyu vaifarira nzvimbo, usanetseka. Achiri Unogona kutyaira motokari kune dumba wako zvinobudirira pre-zvinoratidza kushambadza, akadai email yakananga tsamba postcards, uye panguva-dzinoratidza zvokushambadzira.
Zvekare: 5 Mazano Aunofanira Kuziva Pamusoro peKe Shell Scheme Yakatanga
Zvadaro: Chii chakakosha nezve SEG lightboxes?